हुम्लामा अचम्म, ८ वर्षीया बालिकाले यस्तो गर्न सक्लिन ? « Etajakhabar
हुम्लामा अचम्म, ८ वर्षीया बालिकाले यस्तो गर्न सक्लिन ?
काठमाडौ । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–२ ठेहेगाउँमा ८ वर्षीया बालिकाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। मंगलबार दिउँसो आफ्नै घरको गोठमा खेलिरहेकी बालिका सञ्जिबा बोहरा अचानक मृ त भेटिएकी हुन्। उनको मृत्युले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । केही ब्यक्तिले भने उनले देह त्याग गरेको भन्दै प्रचार गरेका छन् ।
साथीसँग खेलिरहेकी बालिका बोहरालाई एकछिनपछि मृ ता वस्थामा भेटिएको स्थानीले बताएका छन्। गोठमा खच्चडलाई प्रयोग गर्ने डोरीले बाँधिएको अवस्थामा बालिका बोहरा मृ त भेटिएकी हुन्।८ वर्षकी बालिकाले कसरी यस्तो गर्न सक्छिन् ? भनेर आशंका उत्पन्न भएको छ।
उनी स्थानीय पञ्चमुखी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा २ मा पढ्थिन्। खबर पाउनेबित्तिकै दोजम प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालेको छ। थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हेरम्ब शर्माको टोली पनि घटनास्थल पुगेको छ। बालिकाको शव सदरमुकाम सिमकोटस्थित जिल्ला अस्पताल ल्याएर परीक्षण गरिने प्रहरीले जनाएको छ।